Fizahantany-Alaotra : azo aleha moto izao Antanandava–Sahatavy
Posted on octobre 10, 2017 by admin_tour
Efa mipetraka ny fandaharam-potoana. “Nifanao fotoana hiaraka handeha squad sy moto hiala avy ao Antanandava, hamakivaky ny alan’i Zahamena ary hipaka any Sahatavy (Atsinanana), izahay sy ny solombavambahoakan’Ambatondrazaka, Amparafaravola ary Andilamena, ny 12 oktobra izao”, hoy ny loholona Ranenony Andrianirina, antsoin’ny maro hoe ”Senatera Day”. Izy no angady nananana sy vy nahitana ny fanokafana ny lalana tamin’ny alalan’ny angadin’ny fokonolona niara-miasa tamin’ity loholona ity.
Toerana mitahiry ny anganon-dRasoavintsy sy ireo karazana zavaboahary maro ao anatin’ny alan’i Zahamena. Faly ny mponina fa efa mivezivezy any ny zandary ary misokatra izao ny toeram-pitsaboana ao Manambato, nikatona nandritra ny 10 taona.
“Telo metatra ny sakan’ny ampahan-dàlana 70km ; roa metatra kosa amin’ny sisa. Efa nisy vazaha mpizahatany nandeha moto tafaverina indray andro ary lehilahy nandroaka kisoa avy any Sahatavy, namidy tao Imerimandroso”, hoy ny fanamarihan’ny senatera. Hitsena ireto olom-boafidin’Alaotra-Mangoro ireo, ny depioten’i Vavatenina.
“Hifandinika amin’ireo mpandraharaha amin’ny sehatry ny fizahantany izahay hametrahana lalam-pizahantany Antananarivo-Anjozorobe-Manodidina ny farihin’Alaotra-Zahamena-Vavatenina- Mahavelona-Toamasina-Andasibe-Antananarivo”, hoy hatrany ny senatera Day.
Source : Taratra ny 10/10/2017/Rarivo
Fleuve Onilahy : des éco-guides certifiés pour promouvoir le tourisme durable dans le sud Ouest de Madagascar
Tourisme : Mesures strictes face à l’épidémie de peste